Wind of Change | rafozan-doza |
Published on 12/30,2009
Tonga indray ary ilay fotoana hanaovana litania ny taona eto. Lainga lainga fa ny post faran'ny taona ihany ngambany ny lahatsoratra mba tena hoe "honnest" ataoko eto. Koa dia manasa anao ary hiaraka hivetsovetso kely iray minitra.
T@ erin-taona ah zany efa be taraina be dia mba hoe aleo mba ze zavatra tsara no asongadina kosa @ ity. Fa eeeee, ra misy ny taona faran'ze hoe mahazo sahalan'isa 8/20 dia ity taona 2009 ity. Bon, Efa kobo ihany fa hoe fiasco be ity fa tsy noeritreretiko velively hoe rehefa natao ny fandihina toa tena tsisy raha manjary mintsy. Eny e, namokatra ny vahoaka, fahasoavana lehibe tokoa izany ary mamerina ny firariantsoa hoan'ny nahazo vahiny rehetra. Fa ankoatr'izay, ho ahy manokana dia tsisy zavatra mamiratra na ny kely aza.
Voalohany @ izany ary dia ny krizy eto @ firenena. Ny hany zavatra iombonan'ny mpanohana an'i tgv sy ny mpanohitra azy ary ihany koa ireo olom-pirenena tsy ankanavaka ngambany dia hoe zava-dratsy ho an'ny firenena ny fisian'ny korontana sy ny krizy. Tsy misy iadian-kevitra hoy ah fa notre DJ national est l'homme de l'annee 2009, eto amintsika. Nanova zavatra izy, tsy haiko fotsiny hoe nihatsara sa niharatsy fa en tt cas, mijaly ny vahoaka...
Faharoa, otran'ny bedabe ny star jokotra nandritra ny 2009 iny. Tsy fan club be an'izy rehetra aloha za fa nampalahelo ihany ny toa andr'i Michael Jackson, Patrick Swayze, Britanny Murphy... Levelo hoan'ny malagasy. Jacques Sylla koa, tsy mpihira fa azo lazaina hoe olo-manga ihany koa na dia hoe mpamadika aza no tena otran'ny mampalaza azy bebe kokoa @ izao... Dia nisy namako izay koa lasa t@ 2009... sy ireo maro tsy voatanisa... lalan'ny fiainana moa izany ary tombon-dalana ny azy fa zany hoe mba le 2009 mintsy no ratsy vitana ee.
T@ ity 2009 ity koa no tena nahatsapako fahadisoam-panatenana be indrindra hatr@ zay andro niainako, t@ olona neveriko hoe namana. Tsy nampoiziko mihintsy hoe misy olona tena ampianao izao kanefa dia otran'ny hoe ny hanao ratsy anao no eritreretiny voalohany ra vao mifoha izy @ maraina... resaka perso moa le izy, mety hoe za koa no tena naif be, ary efa nifamela zahay fa mba lazaiko fotsiny hoe tsy ho adinoko mandrakizay...
Ny tanjona tsy tratra moa dia efa mahazatra toy ny isan-taona. Otran'ny hoe "on maitrise tout" foana ny pozipozin'le izy rehefa mande ny taona kanefa @ farany tsy hita akoriny zay tena hoe zao no fandrosoana rehefa atao ny bilan... ozy le namako zay hoe elah ngambany efa voaozona. Na hoe mijinja ny ratsy nataoko tany @ "fianana taloha" na hoe izay mety ho ataoko atsy ho atsy... Dia izany ony ry A/tra a: Eloi, Eloi, Lama Sabachtani...
Na izany na tsy izany aza anefa tsy atao mahakivy izany. I'm thankful. Mety hoe ratsy kokoa noho izao aza. I mean, a lot worse. Ny taona vaovao mitondra fanatenana vaovao. Ary mino marimarina aho fa betsaka ny zava-tsoa ho avy @ 2010. Na hoan'ny firenena, na ho antsika tsirairay mpamaky ary indrindrindra hoy ahy ihany koa. Enganie mba ho version zavatra tsara @ izay no tantaraina @ erin-taona... Indraindray koa moa le izy feno zava-tsoa fa isika/za no minia tsy mijery afa tsy ny zava-dratsy. Ny ratsy koa mety ho soa. Asa, miankina @ tsirairay...
Hamaranako azy ary dia aleo asiana an'ity hira ity: What's up an'i 4 non-blondes. Tiako be izy io tany @ 10 taona lasa tany. T@ izany tsy mba nieritreritra hoe ahoana re za ity afaka 10 taoana ee. Hitako fa tsy niova firy aloha ary ra possible ny hoe time travelling, na afaka mamaky an'ity i teen simp dia lazaiko hoe: you got it right since then, you will still like this song ten years from now... dia aleo tahirizina ny playlist @ ity taona ity, sa ahoana? mba ho jerena afaka folo taona hoe eee t@ izany andro izany ah le niezaka ho mamo kanefa tsy nety tafa mintsy hihihi
... And I try, oh my God do I try
For a revolution...
Tonony feno: Jereo eto.
Zay ary fa dia @ erin-taona ndray ary ry namana isany. Na afaka folo taona koa ry future simp... Mirary soa antsika rehetra. Enganie mba ho taona zina tokoa ny taona 2010.
Manaova fety finaritra daholo.
Posted by simplex at 20:05 Hametraka hevitra (5) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Diary